XOG CUSUB: Axmed Madoobe oo guul kula laabanaya Kismaayo iyo Villa Soomaaliya oo loo heshiiyay! | HalQaran.com
Home Wararka Maanta XOG CUSUB: Axmed Madoobe oo guul kula laabanaya Kismaayo iyo Villa Soomaaliya...
Nairobi (Halqaran.com) – Hoggaamiyaha maamulka Jubbaland, mudane Axmed Madoobe ayaa iska fur furay culeyskii siyaasadeed ee ka heystay mucaaradka Jubbaland, wuxuuna dib ugu laabanayaa magaalada Kismaayo isagoo wax wel wel ah qabin marka laga reebo Khilaafka Dowladda Federaalka oo culeys sidaasi u buuran ku heyn.
Cabdinaasiir Seeraar oo ahaa mucaaradkii ugu weynaa ee Axmed Madoobe ayaa hadda heshiis la galay Axmed Madoobe, wuxuuna ku qancay qodobo la soo hordhigay oo qaarkood uu kaga maqnaa maamulka Jubbaland, sida ay sheegayaan mas’uuliyiin ka tirsan maamulka Jubbaland.
Odayaal isku heyb yihiin Cabdinaasir Seeraar ayaa ku qasbay inuu la heshiiyo Axmed Madoobe cadow badan isku baheysteen si horay loogu sii socdo, wuxuuna aqbalay codsiga reerkiisa kaga yimid.
Ilaa iyo hadda lama oga go’aanka uu qaadan doono Xildhibaan Cabdirashiid Xidig oo isagana ah mucaaradka Axmed Madoobe ee ku heysto magaalada Kismaayo, waxayna saaxiibo dhow ay wada ahaayeen Cabdinaasir seeraar oo hadda u weecday dhanka Axmed Madoobe.
DF Soomaaliya oo kaashaneysa Dowladda Itoobiya ayaa dagaal siyaasadeed oo aad u adag kula jirta Axmed Madoobe, kaasoo la ogeyn halka uu ku dambeyn doono.
Axmed Madoobe iyo Seeraad oo heshiiyay
Villa Soomaaliya oo loo tashaday